China Maa ụlọikwuu Tent 2/4 Onye Family Tent Double Double Layer Outdoor Tent factory and manufacturers | Sisili
Campmụaka Maa ụlọikwuu Playhouse ...
3 na 1 Ime ụlọ / n'èzí Playh ...
Maa ụlọikwuu Tent 5/7 Onye Fam ...
Maa ụlọikwuu tent 2/4 Onye Fam ...
2/4 Onye Pop Up tent Fami ...
Inglọikwuu na-ama ụlọikwuu 2/4 Onye Familylọ Ntu Ezinụlọ Nke abụọ
Aha ngwaahịa: Camplọikwuu
Agba agba: Oroma / Green / Blue
Size: Ogige dị elu 240 * 210 * 135cm + Ogige dị n'ime 230 * 200 * 125cm maka ndị okenye 3-4
Ihe: 170T ọlaọcha plasta + 210D akwa Oxford
Mkpanaka ihe: faiba glaasi
Na-eku ume & Anụ:2 Nnukwu ọnụ ụzọ nwere zipa abụọ na-enye ventilashị ka mma. Ejiri 8 Lightweight Alloy Pegs na 4 Guy Ropes, ndị ụlọikwuu nwere nnukwu nguzogide nke ifufe. More nchebe.
Nchedo gburugburu:170T ọlaọcha plasta ihe na 210D Oxford Ground Sheet enye 2000mm mmiri na-eguzogide na magburu onwe UV-eguzogide. Enwere ike imechi ọnụ ụzọ ejiri akwa zipa SBS dị elu, nke na-enye ike iguzogide ihu igwe siri ike.
Mfe Mbido:Ntabipụta Gbapụta Mechanism na-eme ka ị melite n'ime tent n'ime 1 nkeji. Nanị bulie elu ụlọikwuu ahụ, gbapụta usoro dị elu wee pịa ala nkwonkwo ala n'ime ebe. Mfe ma chekwaa oge gị.
Multifunctional:Ọ na-agụnye tent na mpụga tent. enwere ike iji ya iche. Tentlọ ntu dị n'ime nwere ike igbochi mwakpo nke anwụnta na ụmụ ahụhụ, ebe ụlọ mpụga nwere ike ịmachi ma na-egbochi ụzarị UV. Mixed were ike okpukpu abụọ nke waterproof ma na-mma mmiri ozuzo mmetụta
GN'S KA CAN P CANROT FROMLỌ N'ụlọ ntu anyị?
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme njem na-apụ apụ n’èzí, ị ga-achọrịrị kọfịfetị kọmpụta nwere ike ị nweta ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọzọkwa ụlọikwuu ahụ ga-echebe site na mmiri, ifufe na mmiri ozuzo. Ya mere na ị nwere ike ịga njem n'èzí n'emeghị ka mmiri zoo.
Ọ bụrụ na ị bụ onye zuru oke, mgbe ahụ ị ga-achọ ịnweta ụlọ ntu sara mbara nke nwere ike ịnabata ezinụlọ gị gụnyere onye ị hụrụ n'anya, gị na ụmụaka 1-2, ka ị nwee ike ịtọ ụlọ ntu ma nwee elele uru nke ụlọikwuu mgbe ị na-egwu n'èzí, na-enwe obi ụtọ ezinụlọ zuru oke.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ n'ịhụnanya, mgbe ahụ ị chọrọ n'ezie inwe ike ịtọ ntọala ịhụnanya ngwa ngwa oge ọ bụla, ebe ọ bụla gị hụrụ n'anya n'èzí. Mgbe ị na-apụ, ịnwere ike iwetu ụlọ ntu ahụ ozugbo, na-echekwa oge ọrụ gị. Mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọ ofụ nke ịhụnanya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ na-amasị oriri na ndị enyi, mgbe ahụ ị chọrọ n'ezie ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Otu ụlọikwuu nwere ike ịmịcha ntutu, ebe gị na ndị enyi gị nwere ike ịkparịta ụka. Uzo ozo izu ike Onyinyo ebe I gha ehi ura mgbe ike gwu gi, Mgbe i jiri ụlọ ntu anyị mee ihe, emezuru ihe ndị a. Tlọikwuu anyị na-eji akwa PED pụrụ iche PU 3000, nwere mmetụta dị mma na-egbochi mmiri na ọpụpụ pụrụ iche. Oghere dị n'ime ụlọikwuu ahụ sara mbara. Na akpaka haịdrọlik mmapụta ngwa imewe nakweere, nke nwere ike melite na-ala ngwa ngwa. enwere ike itinye ya na azu paaki. Tentlọ ntu a na-elekwasị anya na nchebe nzuzo. Mgbe emechiri ákwà mkpuchi, a gaghị ahụ ụlọ dị n'ime ụlọ ntu ahụ site na mpụga. Nwere ike ịnụ ụtọ oghere ụlọ nke onwe gị.
Nke gara aga: 2/4 Onye Pop Up Uplọikwuu Family Maa ụlọikwuu Portable ntabi Automatic tent Automlọikwuu Waterproof Windproof maka Camping Hiking Mountaineering
Osote: Lọikwuu na-ama ụlọikwuu 5/7 Onye Ezinụlọ entlọikwuu Ugboro abụọ N'elu Tlọikwuu
Ike Shell ụlọ Top tent
Entlọikwuu nke ime ụlọ
Flọ Elu ụlọikwuu
22pcs Maa ụlọikwuu Cookware ọgbaghara Set na nghọta Po ...
Butterfly udi vlanahụ maa ụlọikwuu magnesium flin ...
100pcs Ọkachamara mara ụlọikwuu ọkachamara Mberede ...
Maa ụlọikwuu Fire Starter Bushcraft Flint Rod na C ...
Na-adịgide Adị n'doorlọikwuu, Starter Magnesium oku, Inflatable ụlọ Tlọikwuu, Xtm ụlọ Top tent, Gear Mberede Mberede, Vlanahụ Fire Starter,